कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको नेपालमा नयाँ आशा पलायो, घट्न थाल्यो संक्रमण दर र मृतकको संख्या, बढ्दै निको हुने दर – नेपाली संगसार
कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको नेपालमा नयाँ आशा पलायो, घट्न थाल्यो संक्रमण दर र मृतकको संख्या, बढ्दै निको हुने दर
नेपाली संगसार calendar_today २ जेष्ठ २०७८, 1:19 pm
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसका ७ हजार ३ सय १६ सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा १९ हजार ५ सय ३९ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ सम्बन्धी बिवरण अद्यावधिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा छ हजार ६ सय ४८ जना कोरोनामुक्त भएको जनाएको छ । सोही अबधिमा १ सय ४५ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए ।
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार ६ सय ९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा एक हजार ८ सय ८१, ललितपुरमा ४ सय ३६ र भक्तपुरमा २ सय ९२ जना गरी दुई हजार ६ सय ९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । आइतबार देशभरमा भने सात हजार ३ सय ६८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
बागमती र कर्णाली प्रदेशको अवस्था के छ ?
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएपछि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका बिरामीलाई शय्या पाउन निकै कठिन हुने गरेको बिरामीका आफन्तहरूले बताएका छन्। बिरामीलाई एम्बुलेन्समा राखेर ४ घण्टासम्म अस्पतालहरू घुमाउँदा बल्ल बल्ल शय्या पाएको सैनिककुमार महतोले बताए। उनी भन्छन्, “बिरामीलाई शय्या पाउन पनि सोर्सफोर्स चाहिँदो रहेछ नत्र मुस्किल छ।